सबै भन्दा राम्रो डेटिङ अनुप्रयोगहरू लागि सम्बन्ध - सोध्न पुरुष
सबै भन्दा राम्रो डेटिङ अनुप्रयोगहरू लागि सम्बन्ध — सोध्न पुरुष
डेटिङ अनुप्रयोगहरू थिए सिर्जना गर्न भेट्टाउने बनाउन आफ्नो अर्को सम्बन्ध सजिलो छ । तर यति धेरै फरक प्लेटफार्म देखि चयन गर्न (र प्रशस्त सदस्य मा हस्ताक्षर को लागि एक राम्रो समय छैन, एक लामो समय को) गर्न प्रयास, एक खेलमा पाउन जो यहाँ छ सही कारण महसुस गर्न शुरू गर्न सक्छन् किसिमको को असम्भव छ । ‘ प्राप्त गर्न शुरू बाहिर जलाइएको देखि आफ्नो अनलाइन खोज को लागि ‘एक,’ यो समय हुन सक्छ आफ्नो रणनीति र यो अनुप्रयोग प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने पत्ता लगाउन क्रम मा उनको छ । यो भन्दै जान्छ रूपमा, परिभाषा को पागलपन गरिरहेको छ एउटै कुरा भन्दा र अधिक फेरि, आषा एक फरक परिणाम हो । त्यसैले यदि यो आवाज धेरै जस्तै आफ्नो वर्तमान अनलाइन डेटिङ जीवन, ‘ प्रक्रिया र प्लेटफार्म ‘ गर्न बन्न सुरु शाखाहरू बाहिर र प्रयोग गर्न प्रयास गर्नुहोस् नयाँ कुरा छ । सत्य भन्नुभयो हुन, प्रशस्त छन् महिला बाहिर त्यहाँ छन् जो प्रयोग डेटिङ अनुप्रयोगहरू केही पाउन भन्दा बढी गम्भीर एक रात अडान कुञ्जी कसरी थाह र जहाँ तिनीहरूलाई पाउन. हामी सोधे केही डेटिङ विशेषज्ञहरु लागि आफ्नो सबै भन्दा राम्रो सुझाव र सल्लाह जो डेटिङ अनुप्रयोगहरू तपाईं पाउन मदत गर्नेछ एक म्याच गर्ने गरेको पनि देख लागि प्रतिबद्धता छ । यहाँ आफ्नो सिफारिसहरू लागि सबै भन्दा राम्रो अनुप्रयोग गर्न प्रयोग हुनुहुन्छ भने तयार बसोबास र केही स्मार्ट रणनीति तपाईं मदत गर्नेछ भन्ने पाउन उनको कुनै समय मा. ‘ पाउन संघर्षरत तपाईं चाहनुहुन्छ के मा एक डेटिङ अनुप्रयोग (पढ्नुहोस्: कसैले चासो छ, जो पत्ता एक गम्भीर सम्बन्ध), एक चुनौती तपाईं सम्म हुन सक्छ विरुद्ध छ कि तपाईं निश्चित हुनुहुन्न के आफ्नो मिल्न खोजिरहेको छ । एलेना, लेखक को प्रेम सूची: रही तपाईं चाहनुहुन्छ के भन्छन् लिन देखि एक क्यू यो बनाउन, र आफ्नो मनसाय स्पष्ट आफ्नो प्रोफाइल मा. ‘, » विवाह र सुल्झाउन तुरुन्तै तल’ मार्फत आउँछ पनि बलियो छ, ‘ उनी भन्छन्, ‘तर केहि जस्तै, ‘म खोजिरहेको छु एक प्रतिबद्ध सम्बन्ध’ खुल कुराकानी. ‘लेख्दा आफ्नो, भन्छन् राख्न यो छोटो र मीठो छ, र के के समावेश एक संभावित लामो अवधि साथी.
भएको फोटो प्रदर्शन आफ्नो व्यक्तित्व महत्वपूर्ण छ: तिनीहरूले अरूलाई आमन्त्रण गर्न प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ थाह, यो वास्तविक तपाईं? मनमा राख्नुहोस् कि कुनै एक छ, समय पढ्न एक उपन्यास, त्यसैले लेख्न. ‘जहाँसम्म निर्धारण कि वा छैन आफ्नो मिलानको लागि यहाँ हो, वास्तविक कुरा भन्छन् एक तस्वीर लायक एक हजार शब्द छ । ‘फोटो हेर्न ध्यान,’ त्यो सुझाव छ । ‘यी सबै आधा-नाङ्गो फोटो? शायद व्यक्ति खोजिरहेको छ एक तातो हुक. तिनीहरूले आधा मातेको फोटो? त्यो शायद र केहि को लागि देख छैन गम्भीर छ । ‘कम-गुणवत्ता फोटो वा प्रोफाइल बिना एक जैव पनि छन् कि संकेत यो व्यक्ति दिइरहेको छैन धेरै प्रयास, र छैन केहि को लागि देख गम्भीर छ । समय दिन वा रात को हुनुहुन्छ भनेर सामान्यतया कुराहरु संग एक खेलमा पनि हुन सक्छ गप्पी चिन्ह के त्यो लागि देख. ‘ध्यान गर्न जब तिनीहरूले छौं बनाउने कुराकानी संग, तपाईं’ भन्छन् लरेन लेविन, डेटिङ विशेषज्ञ र सह-पाहुना. ‘यो समयमा ‘ र पारित गर्न प्रयास र समय? यो साँच्चै लेट रात मा? यो शायद छ छैन जो कसैले लागि देख एक सम्बन्ध छ । पनि, कुराकानी गर्नुपर्छ पदार्थ. यो बस भने, ‘ ?’ वा ‘के तपाईं गरिरहेका छन् आज?’ दिनसम्म अन्त मा, तिनीहरूले शायद छौं देख छैन प्राप्त गर्न थाह मा तपाईं एक गहिरो स्तर छ । ‘लेविन भन्छन् पनि राख्न यो औंठी को नियम ‘ मिल्न । ‘यदि तिनीहरूले एक वास्तविक कुराकानी र प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ तपाईंलाई थाहा रूपमा राम्रो, तिनीहरूले छौं शायद केहि मा चासो बढी छ,’ उनी भन्छन् । ‘यदि तपाईं रही छौं, एक-लाइन प्रतिक्रिया, तिनीहरूले छौं शायद छैन मा लगानी गर्न प्रयास कसैले. पनि, माथि पूरा रूपमा चाँडै तपाईं सहज महसुस गर्छन् । यो त धेरै सजिलो छ के बुझ्न कसैले जस्तै छ र तिनीहरूले के खोज्दै हुनुहुन्छ गर्दा, तपाईं तिनीहरूलाई संग सामना गर्न अनुहार । ‘अधिक संभावित मिलानको तपाईं, अधिक संभावना यो छ कि पाउन जाँदै हुनुहुन्छ, सही महिला लागि, तपाईं, सही? अनुसार जेम्स एन्डरसन, डेटिङ विशेषज्ञ मा परे उमेर, यो तरिका को सोच वास्तवमा अन्त छौं जब लागि बजार मा केहि अधिक गम्भीर छ । ‘धेरै डेटिङ अनुप्रयोगहरू र डेटिङ साइटहरु छन् अनिवार्य एक संख्या खेल,’ उनी भन्छन् । ‘तपाईं को माध्यम ले देखो सयौं प्रोफाइल, सन्देश, मान्छे दर्जनौं, र शायद केही प्राप्त मिति. कफी संग भेट्छन् कुराहरू धेरै फरक छन् । तपाईं प्राप्त एक दैनिक मेल छ कि ठीक फिल्टर संग लाइन मा हुनुपर्छ के तपाईं को लागि देख छन्. तपाईं देखि मात्र प्राप्त एक खेलमा एक दिन, प्रत्येक व्यक्ति वास्तवमा लिन्छ समय समीक्षा गर्न को खेलमा सट्टा बनाउने निर्णय दुई सेकेन्ड मा आधारित फोटो । ‘तपाईं देखेको छु, विज्ञापनहरु, तपाईं सुने छु सफलता कथाहरू, र, जबकि तपाईं गर्यौं शायद संग को विचार राख्दै पछि पैसा को लागि आफ्नो खोज मा एक सम्बन्ध, तपाईं अझै पनि छैन को ट्रिगर निकालयो । ‘ मान्यता विषय, यहाँ हामीलाई सरल हुन तपाईं संग: अधिक संलग्न एक डेटिङ अनुप्रयोग छ, यो कम संभावना प्रयोगकर्ता यो प्रयोग हुनेछ को लागि कम-प्रतिबद्धता आकस्मिक मुठभेडों. प्रशस्त छन् तपाईं प्राप्त संग एक म्याच बनाउन प्रक्रिया अधिक सरल, देखि भनेर बाहिर देखाउँदै समानता हेर्दै गर्दा प्रोफाइल अपलोड क्षमता भन्दा बढी एक मुट्ठी को फोटो, त्यसैले तपाईं प्राप्त कि एक फुलर ‘. ‘, निःशुल्क लागि एक महिना गरेको सदस्यता तपाईं फिर्ता सेट हुनेछ $. (‘ प्रतिबद्ध गर्न इच्छुक तीन महिना लागि, $.
लिग अन्तर्गत संचालित यस्तै सीमित खेलमा सिस्टम रूपमा कफी भेट्छन्. वास्तवमा, त्यहाँ पनि एक प्रतीक्षा सूची गर्न साइन अप गर्न सक्छन्, जो सीमा देखि एक गर्न केही दिन को महिना मा निर्भर गर्दछ, प्रयोगकर्ता आधार उपलब्ध. पछि तपाईं माध्यम हाम फाल्न ती, तपाईं दिइएको छौं तीन मिलानको प्रति दिन मा आधारित प्राथमिकताहरू कि तपाईं रूपरेखा, जो समावेश निकटता र उमेर. जबकि रही सुरु, यो लिग मा एक जबकि लाग्न सक्छ, यो अनुप्रयोग स्वीकृति प्रक्रिया सुनिश्चित गर्छ कि मान्छे यो प्रयोग गर्दै छन्, यो लिएर गम्भीर छ । लिग हुनेछ वास्तवमा लात निष्क्रिय प्रयोगकर्ता बन्द दुई सप्ताह पछि, सुनिश्चित जो मान्छे हुनुहुन्छ मिल्ने संग वास्तवमा यो प्रयोग. अनलाइन डेटिङ कसैलाई हुन सक्छ तर सम्बन्ध-केन्द्रित छन् जो महिलाहरु रही सन्देश पठाए, आफ्नो डेटिङ अनुप्रयोग इनबक्स मा नियमित, यो अन्त गर्न सक्छन् माथि बनाउन तिनीहरूलाई फेंक को तौलिया मा. यस बनाएर अनुप्रयोग सन्देश सुविधाहरू महिलाहरु’ विकल्प । ‘एउटा ठूलो देखि अनलाइन डेटिङ छ कि महिला हो बिल्कुल संग मान्छे सन्देश,’ एन्डरसन बताउँछन् । ‘यो बारी गर्न सक्छन् को एक धेरै योग्य महिलाहरु बन्द र नेतृत्व केही असमान शक्ति गतिशीलता संग धेरै अनलाइन साइटहरु. संग, तपाईं एक पटक म्याच संग एक संभावित साथी महिला पर्छ पहिलो कदम बनाउन. यस लागि अनुमति दिन्छ एक राम्रो अनुभव लागि महिला, एक उच्च गुणवत्ता को प्रयोगकर्ता, र समग्र एक राम्रो अनुभव लागि सबैलाई । ‘तपाईं हुनुहुन्छ भने प्रयास को थकित निर्धारण गर्न आफ्नो अनुकूलता संग संभावित मिलानको मा आधारित केही फोटो र तीन इमोजी तिनीहरूले समावेश आफ्नो, भन्दा कुनै थप हेर्न कुलीन एकल । क्रम मा साइन अप, सदस्यहरु आवश्यकता पूरा गर्न एक व्यापक व्यक्तित्व परीक्षण, जो छ, त्यसपछि पहिचान गर्न प्रयोग मिल्न आफ्नो क्षेत्र मा. तपाईं पछि छौं साइन अप, साइट स्रोत — संभावित मिलानको, दिन प्रति समाप्त जो समय को सफा फिर्ता र निस्कने र बनाउँछ लागि एक अधिक प्रतिबद्धता-उन्मुख प्रयोगकर्ता आधार (किनभने कुनै एक मा आफ्नो सही मन खर्च गर्न जा रहेको छ मिनेट मा एक मानिसको विचार हुनुहुन्छ भने बस प्राप्त गर्न प्रयास भाग्यशाली रात).
‘ बिलबोर्ड विज्ञापन
डेटिङ साइट «भिडियो डेटिङ» भएको छ एक क्षण, आफूलाई स्थिति रूपमा सम्बन्ध-केन्द्रित. जसको अर्थ संभावना उच्च हो कि एकल महिला आफ्नो क्षेत्र मा हाल पुन डाउनलोड गर्न यो अनुप्रयोग मा आशाहरू कि यो छैन केही झूटा विज्ञापन । विज्ञापनहरु अलग छन्, सुविधाहरू मा «भिडियो डेटिङ कि» उधारो राम्रो गर्न खोज्ने एक खेलमा त्यो देख को नै स्तर लागि प्रतिबद्धता तपाईं छन्. स्टार्टर्स लागि, मंच विशेषताहरु एक अधिक व्यापक प्रोफाइल, अनुमति दिन्छ जो सदस्य, बाहिर भर्न आफ्नो गतिविधिलाई के, आफ्नो विशिष्ट शुक्रवार रात जस्तै देखिन्छ र तिनीहरूले गरिरहनुभएको के संग आफ्नो जीवन दिने, बढी राम्रो-गोल विचार गर्ने ‘. तपाईं पनि गर्न सक्छन् खोज शब्दहरु प्रयोग (लाग्छ ‘प्रतिबद्धता’ वा ‘केहि को लागि देख गम्भीर’). कसरी निर्भर धेरै प्रश्न आफ्नो खेलमा जवाफ छ मा मुद्दाहरू छन् कि सामान्यतया बन्द तालिका लागि पहिलो तारीख कुरा जस्तै राजनीति र धर्म, ‘ पनि दिइएको एक प्रतिशत अनुकूलता हेर्न के आफ्नो नहुनु हो । यस्तै कफी भेट्छन् (र साँचो गर्न यो नाम) एक पटक, तपाईं दिन्छ एक खेलमा प्रति दिन आफ्नो प्राथमिकतामा आधारित छ । तपाईं पनि छैन कुनै भर आउन धमिलो, कम गुणवत्ता फोटो मा अनुप्रयोग देखि, त्यहाँ एक टीम भनेर पुष्टि प्रत्येक प्रोफाइल फोटो अपलोड सुनिश्चित गर्न यो राम्रो गुणवत्ता को (जो लिन सक्छ घण्टा). जबकि छैन रूपमा व्यापक रूपमा केही अन्य अनुप्रयोग यो सूचीमा छन्, को एक सूची प्रश्न ‘ जवाफ क्रम मा को लागि यो अनुप्रयोग सुरु गर्न संभावित मिलानको. आफ्नो दैनिक मेल म्याद घण्टा भित्र, जसको अर्थ प्रयोगकर्ता रहन लगी ‘